ဘိန်းအစားထိုး မြန်မာ့ကော်ဖီစေ့ !!!! ဂျပန် MUJI ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းချပြီး !!! - JAPO Japanese News
ဘိန္းအစားထိုး ျမန္မာ့ေကာ္ဖီေစ့ !!!! ဂ်ပန္ MUJI ဆိုင္ေတြမွာ ေရာင္းခ်ၿပီး !!!
လာ 28 Sep 2020, 16:15 ညေန
မြန်မာမှာဘိန်းအစားထိုးစိုက်ပျိုးသူ၊ တောင်ယာလုပ်သမားတို့ရဲ့ဝင်ငွေအနေနဲ့ စိုက်ပျိုးလာတဲ့ ကော်ဖီစေ့တွေကို ကျန်ခဲ့တဲ့ ၉ လပိုင်း ၂၃ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ကနေစပြီး ဂျပန်ပြည်တွင်းရှိ 無印良品 MUJI stores တွေနဲ့ online stores တွေမှာ စပြီးရောင်းချနေခဲ့ပါပြီး…..
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအမျိုးမျိုးသော တိုင်းပြည်နဲ့နေရာဒေသတွေမှာ “ Comfortable living” ကိုဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့ 無印良品 MUJI ဆိုတာ၊ နေစဥ်ဘဝမှာလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရောင်းချပေးရုံသာမက၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေကို စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ဟာ ထိုင်း၊ လာအိုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ရွှေတြိဂံဒေသတွင်းရှိတောင်တန်းဒေသတစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ အဲ့ဒီနေမှာ opium ရဲ့ကုန်ကြမ်းဖြစ်တဲ့ ဘိန်းတွေကိုစိုက်ပျိုးပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့လူနည်းစုတွေရဲ့ ဘဝဟာခက်ခဲပါတယ်။ အလုပ်ကြမ်းဖြစ်ပြီး Slash-and-burn agriculture ပုံစံနဲ့စိုက်ရတဲ့ ဘိန်းကသူတို့ရဲ့ အဓိကဝင်ငွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီနှစ်တွေမှာတော့ မြန်မာအစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုတွေလျော့ကျသွားပေမဲ့ ဘိန်းအပြင်အခြားသောဝင်ငွေမရှိတဲ့အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသမားအများစုက အကြပ်အတည်းဖြစ်သွားရတာနဲ့အတူ စိုက်ပျိုးရေးသမားတစ်စုကတော့ အစိုးရလက်လှမ်းမမီလောက်တဲ့နေရာတွေမှာ ဘိန်းတွေကိုဆက်လက်စိုက်ပျိုးနေကြပါတယ်။
ဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်၊ အစိုးရနဲ့ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ (UNODC) ဟာပူးပေါင်းပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဘိန်းစိုက်ခင်း အမြင့်ပေ ၁၀၀၀ မှ ၁၈၀၀ ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ကော်ဖီမျိုးစေ့ စိုက်ပျိုးမှုအတွက်ရာသီဥတုကလည်းကိုက်ညီတာကြောင့် ပြည်နယ်တွင်းမှာ ဘိန်းကနေကော်ဖီပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးမှုကို တွန်းအားပေးပါတယ်။
UNODC ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့အတူ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူများအသင်း “ Green Gold Cooperative” ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ..
လက်ရှိမှာတော့ အယောက် ၉၀၀ နဲ့အထက်တောင်သူများဟာ လာရောက်ပူးပေါင်းပြီး ကော်ဖီတွေစိုက်ပျိုးနေကြပါတယ်။
ဒီလိုပါဝင်လာတဲ့‌တောင်သူတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးပြုမှုတွေနည်းသလို၊ ကော်ဖီအပြင်အခြားသောဝင်ငွေအရင်းအမြစ်တစ်ခု ရရှိဖို့အတွက်၊ အခြားသောသစ်သီးပင်နဲ့ကော်ဖီကိုရောစိုက်ခြင်း agroforestry လို့ခေါ်တဲ့ technique နဲ့ Arabica coffee မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ဆောင်းဦးမှာ ဥရောပကိုပို့တဲ့ကော်ဖီစေ့ရဲ့တင်ပို့မှုတွေကလည်း အစပြုနေခဲ့ပါပြီ။
MUJI က UNODC နဲ့ “ Green Gold Cooperative” တို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး၊ အသင်းဝင်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ကော်ဖီစေ့တွေရောင်းချဖို့ စဥ်းစားလာကြပေမဲ့၊ ထိုစိုက်ပျိုးရေးဒေသတွေကိုသွားလေ့လာကြည့်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေနဲ့ စကားပြောဆိုကြည့်တဲ့အခါ၊ အရွယ်အစားသေးတဲ့ကော်ဖီစေ့တွေကိုတော့ မတင်ပို့ရဘဲ၊ မြန်မာပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွက် အနိမ့်ဆုံးဈေးနဲ့ရောင်းနေရကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ 無印良品 MUJI ကုမ္ပဏီဟာ အရသာပြောင်းသွားလို့မဟုတ်ဘဲ အရွယ်သေးလို့အဆင့်မမီတဲ့ကော်ဖီစေ့တွေကို သင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်လာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ “ မြန်မာ့ကော်ဖီစေ့” တွေကို MUJI stores တွေမှာပြန်လည်ရောင်းချပေးပါတယ်။
ဒါဟာ ကော်ဖီစိုက်တဲ့တောင်သူတို့အတွက် ဝင်ငွေပိုရရှိစေပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဘိန်းစိုက်ခင်းကနေကော်ဖီစိုက်ခင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ အားပေးခြင်းတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတစ်ထုပ်မှာ 200g ပါဝင်ပြီး အခွန်အပါအဝင် ယန်း 990 ပါ။
မြန်မာ့ကော်ဖီစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ဟာကော်ဖီကြိုက်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဝယ်ယူအားပေးဖို့အတွက် အကြုံပြုလိုက်ပါပြီ…
ကဲ..ဂျပန်ရောက်မြန်မာများလည်း မိမိတို့ရဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးပြီး စိုက်ပျိုးရေးသမားတို့အတွက် ဝင်ငွေပိုတိုးရစေသလို ..ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ ဘိန်းအစားထိုးစိုက်ခင်းများအတွက် အတူတကွပူးပေါင်းပြီး ဝိုင်းဝန်းအားပေးကြဖို့ နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်….
FamilyMart က စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္႐ုံနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လတ္ဆတ္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေတြသာအသုံးျပဳသြားမည္ !!!!
ကမာၻေပၚက 日系人 နစ္ခဲဂ်င္းေတြ အမ်ားဆုံးေနထိုင္တဲ့ႏိုင္ငံ
အာဖန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ အသတ္ခံရေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဆရာဝန္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ဆာကူရာပန္းနဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ Sneaker
ဖိႏွိပ္ခံရၿပီး ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရတဲ့ အအိႏုယဥ္ေက်းမႈ
ဒီႏွစ္ရဲ႕အေကာင္းဆုံး Cosplayer က ဘယ္သူျဖစ္မလဲ ?
蕎麦Soba ရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ေနတဲ့အရာအတြက္ ေတာေတာင္ထဲမွာ ဆိုင္ဖြင့္ခဲ့သူ
အဲဒိုအခ်ိန္အခါရဲ႕ ေဈးအျမင့္ဆုံးျပည့္တန္ဆာရဲ႕ တန္ေၾကးက ?